सल्यानमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर पुस्तकालय दिवस मनाइयो (फोटो फिचर)
भाद्र १५, सल्यान । सल्यानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी १२ औं पुस्तकालय दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्ष भाद्र १५ अर्थात आजकै दिनमा मनाइने पुस्तकालय दिवस सल्यान पठन संस्कृतिको पूर्वाधार, पुस्तकालयको विकास र विस्तार भन्ने मुल नाराका साथ घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर मनाइएको हो ।
दलित विकास समाज सल्यानको आयोजना रुम टु रि र पढनको लागि कोठाको सहयोगमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी दिवस मनाइएको हो । सदरमुकाम खलंगाबाट सुरु भएको घुम्ती शिविर श्रीनगर, शान्तिनगर, लान्ती, लुहामसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।
जनतालाई शिक्षित र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले नेपालमा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको रुम टु रिडका कार्यक्रम संयोजक टेकराज शाहीले बताए । पुस्तकालय दिवस ज्ञानको ज्योति छर्ने दिनको रुपमा रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यसलाई केवल नारामा सीमित नगरी पाठक, विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक लगायत आम नागरिकहरूले आदरपूर्वक सम्झने दिनका रूपमा स्थापित गराउनु पर्छ ।’
किताब बिनाको जीबन निरर्थक र जीवनको कुनै महत्व नहुने पढनको लागि कोठा कार्यक्रमका कार्यक्रम प्रमुख विनायक रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘किताब बिनाको जीबनले ढुंगेयुगको स्मरण गराउछ । आज समाजमा जति पनि विकास भएको छ, चाहे त्यो सामाजिक होस चाहे सास्कृतिक होस, चाहे प्राबिधिक होस हरेक परिबर्तनमा पुस्तकको ठुलो हात छ ।’
पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार पनि हो । पुस्तकालयबाट हरेक किसिमको ज्ञान पाउन सक्छौ। त्यसैले पनि यो दिवसको महत्व बढेको छ । पढाई मान्छेको जीबनमा एउटा यस्तो कुरा हो जसले जीबन परिबर्तन गर्न सहयोग गर्दछ ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा वि.सं. १८६९भाद्र १५ गते पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा स्मरण गरिन्छ । पुस्तकालयका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू एवम् पुस्तकालयको आवश्यकता बारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ नेपालमा वि.सं. २०६५ देखि भाद्र १५ लाई “पुस्तकालय दिवस” को रूपमा मनाउन सुरू गरिएको हो । नेपालमा संस्थागत रूपमा पुस्तकालय स्थापना भएको २०० वर्ष भन्दा लामो इतिहास पूरा भएको छ र पुस्तकालय दिवस १२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।